တစွန်းတစ ငယ်ဘဝနှင့် ပြန်သတိရမိတဲ့ ကာတွန်းတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » တစွန်းတစ ငယ်ဘဝနှင့် ပြန်သတိရမိတဲ့ ကာတွန်းတွေ
Posted by Mr. MarGa on Jul 17, 2013 in Arts & Humanities, Creative Writing, Drama, Essays.., Entertainment, My Dear Diary | 96 comments
ခုတလော အတွေးလဲနည်း လူလဲ အပျင်းရောဂါ စွဲကပ်နေလို့ စာမရေးဖြစ်တာတောင် ကြာပေါ့။
ကိုယ်တိုင်သာ စာမရေးဖြစ်တာပါ…………စာဖတ် ကျပြန်တော့လဲ ဟိုအကြောင်းပြ ဒီအကြောင်းပြ နဲ့ ဝေ့လိုက်ဝိုက်လိုက် လုပ်နေတာပါပဲလေ။
ဒီတစ်ခါတော့ အဲဒီ စာဖတ်ခြင်းကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငယ်ဘဝကို ပြန်တွေးမိလို့ အတင်းအကျပ် မှတ်ဉာဏ်ထဲက ပြန်ဖော်ထားတဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေ ပြောပြချင်မိတယ်။
ခေတ်တွေ ကွာလာတော့ တိုးတက်မှုတွေ ဆုတ်ယုတ်မှုကလေးတွေလဲ မြင်လာမိတာကိုး……….
ပြောချင်တဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ ဒီလို……ဒီလို………….
သူများတွေတော့ ကာတွန်းတွေ၊ ရုပ်ပြတွေ ဘယ်အချိန်မှာ စဖတ်ကြသလဲမသိ
ဦးမာဃကတော့ သူငယ်တန်း ကတည်းက အိမ်က တေဇပုံကြားကို ခေါင်းထိုးနေပြီဗျ။
ငယ်ငယ်ကတော့ တေဇထဲက ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေဖြစ်တဲ့ ဦးစိတ်တို၊ မျောက်ညို တို့၊ တီထွင်ပါရဂူ ဖိုးဆိတ်ဖြူ တို့၊ ဦးရှံစားနဲ့ ဦးဒိန်းဒေါင် တို့ ဦးကပ်စေး တို့နဲ့ လုံးလည်ချာလည် လိုက်ခဲ့တာပေါ့။
အဲ့ဒီတုန်းက တေဇထဲက မှတ်မှတ်ရရ ရှိတဲ့ ကာတွန်းဆရာတွေ ဆိုလို့ အခု ပြန်ခေါ်ကြည့်မိတာ ဦးအောင်ရှိန် တစ်ယောက်ပဲ ရေးတေးတေး မှတ်မိတော့တယ်။
အပြစ်တင် မစောကြပါနဲ့ဦး အရပ်ကတို့ရဲ့……….ကလေးတုန်းက ကာတွန်းဇာတ်လမ်းကိုပဲ ပို စိတ်ဝင်စားမိတာကိုးဗျ။
အဲဒီ တေဇကနေ နောက်ကို တစ်ဆင့်တက်ပြန်တော့ ရွှေသွေးကို အပတ်စဉ် ဖတ်သပေါ့ဗျာ။
(အဲဒီ ရွှေသွေး အပတ်စဉ် ဖတ်တဲ့ အကျင့်က လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်ကမှ ပြတ်သွားတယ်။ ဒါတောင် တွေ့ရင် ကောက် လှန်နေတုန်းပဲ။)
အဲဒီမှာ ရွေသွေးရော တေဇရော ဘာများ ကွာသလဲလို့ မေးစရာ ထွက်လာတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ ကွာတာကတော့ ဦးမာဃ ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ တေဇ တွေက ဦးမာဃရဲ့ အစ်ကိုတော် အစ်မတော်များ ခေတ်က အဟောင်းတွေခင်ဗျ။
ရွှေသွေး ကျတော့ အပတ်စဉ် ထွက်တာကို အမြဲနီးပါး ဖတ်ခဲ့ရတာမို့ အသစ်ကို ဖတ်ရတာလို့ ပြောနိုင်သပေါ့။
ရွှေသွေးထဲကနေ ထွက်လာခဲ့တဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေကတော့ စိန်မျောက်မျောက်……တို့၊ အတီး……တို့၊ ပေစိ…….တို့ပေါ့။
(တကယ့်တကယ်ပြောရရင် အဲဒီထက် ရှေးကျတာတွေ ရှိသေးတယ် ခေါင်းထဲက ပြန်ဖော်လို့ မရတော့လို့ ခုနောက်ပိုင်း မှတ်မိတာတွေ ပြောပြတာ)
ရွှေသွေး စာစောင်က ပြောရရင် စာစောင်သဘောမို့ ဖတ်ရတာ ပိုပေါ့ပါးပါတယ်။
သူ့ဆီမှာ အရှေ့က ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်၊ အလယ်မှာတစ်ပုဒ် နောက် အလယ်စာရွက်မှာ ကာတွန်းမဟုတ်တဲ့ ပုံပြင်လိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် နောက်မှာ ကာတွန်းတစ်ပုဒ်၊ အတွင်းနောက်ကျောဖုံးမှာ ဉာဏ်စမ်း ဒါပဲလေ။
အဲ့ဒီတုန်းက ကလေးတွေနဲ့ ဘာမှမဆိုင်ဘဲ ထည့်ပေးထားတဲ့ နောက်ကျောဖုံးက ဟာကြီးလေ။
ပြည်သူ့ သဘောထားရယ် ဒို့တာဝန် အရေးသုံးပါးရယ် (ထင်တာပဲ)
ရွှေသွေးရဲ့ နောက်ထပ် အားသာချက်ကတော့ သူက အင်္ဂလိပ်လိုလေးပါ အောက်က ပါတဲ့အတွက်ကြောင့် ဦးမာဃတို့တွေ အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ အနည်းငယ် အထိအတွေ့ ရှိသပေါ့။
(ပြောသာပြောတာပါ၊ အမြဲတမ်းနီးပါး အဲဒါတွေကို ကျော်ဖတ်တာရယ်)
ရွှေသွေး ပြီးတော့ ဦးမာဃ စာဖတ်အဆင့် တက်သွားတာကတော့ တတိုင်းမွှေး ပေါ့။
အဲဒီမှာ မြိုင်ရာဇာ တွတ်ပီ၊ ကိုရွှေထူးရဲ့ ရပ်ကွက်ထဲမှာဗျာ နဲ့ ပိုးဇာတို့ကို စ တွေ့ပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရ မြန်မာတွေ အတုခိုးပုံကလေး ပြောပါဦးမယ်
လူပျိုကြီး မောင်မောင်ဇာနဲ့ အမြွှာညီအစ်မ လေးမွန် ထွေးမွန်ကိုမှ
လေးမာ ထွေးမာ ဆိုပြီး ထွက်တာတောင် ဖတ်ရသေးသဗျ။
တေဇအစ ရွှေသွေးအလယ် တတိုင်းမွှေး အဆင့်အထိ တက်လှမ်းလာပြီးတဲ့ သကာလ မှာတော့
ဦးမာဃရဲ့ စာဖတ်အဆင့်ဟာ တွေ့သမျှစာအုပ် ဆွဲဖတ်တဲ့အဆင့် ရောက်တော့တာပါပဲ။
အခန့်သင့်စွာနဲ့ အိမ်ဘေးက စာအုပ် အငှားဆိုင်နဲ့ပါ ရင်းနှီးသွားတဲ့ အခါမှာတော့
ဦးမာဃရဲ့ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ၊ အားချိန် နားချိန်တွေဟာ စာအုပ်ဆိုင်မှာ ကုန်ဆုံးသွားပါလေရော…………
စာအုပ် အငှားဆိုင်မှာသာ သွားတာ
ငှားဖတ်ရင်လဲ ဦးမာဃနဲ့ မကိုက်ဘူးလေ။
ဦးမာဃက စာအုပ်တစ်အုပ်ကို တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ အပြီးဖတ်တာ(ဘာစာအုပ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်)
အဲဒီတော့ စာအုပ်က ငှားလာပြီဆိုရင် ဘယ်လောက်မှမကြာဘူး ဖတ်ပြီးသွားပြီ။
ဆိုတော့ စာအုပ်သာ ငှားဖတ်ရင် စာအုပ်ငှားခနဲ့တင် အတော်ကုန်မယ့်အရေးကို မြင်တဲ့ မာတာပိတုများကလဲ
ဦးမာဃကို စာအုပ်ဆိုင်သာ ပို့ထားလိုက်တော့သဗျို့။
တွတ်ပီ လုံးချင်းတွေ၊ ဘိုဘို လုံးချင်းတွေ၊ နောက် လစဉ်ထုတ်တွေဖြစ်တဲ့ ရွှေယမင်းဦး တို့လို ကာတွန်းတွေပါ ဖတ်ဖြစ်သွားသပေါ့
အခုက ကာတွန်းတွေ အပိုင်းကိုပဲ အဓိကထား ပြောချင်လို့ အဲဒါတွေကိုပဲ ပြောတာပါ။
တကယ်က ရှိသမျှစာအုပ် အကုန်ဖတ်တာရယ်။
ဆိုတော့ အဲသလိုဖတ်ရင်း ရင်းနှီးလာတဲ့ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေက
နိုနိုနဲ့ ဒိုရာ တို့
သိပ္ပံပညာရှင် မောင်တီထွင်၊ ဂြိုလ်သားကလေး မောင်ခခွေး စတာတွေ
နောက် အလွန့်အလွန်ဆိုးတဲ့ ဂျောက်ဂျက်နဲ့ သူ့ဖခင် ဦးကြောင်ဇရက်(စာလုံးပေါင်း မှန်လားမသိ)
(ဆောင်ပုဒ်လေးတောင် မှတ်မိနေသေး “တစ်ချက်ပြုံးရင် တစ်ရက်အသက် ပိုရှည်မှာပါ ” တဲ့)
နောက် အတော်လေး စိတ်ဝင်စားစေတဲ့ ကိုမှောင်နှင့် သူ၏အစိတ်အပိုင်းများ၊ ပူစူးမနှင့် ပိုးမွှားများ စတာတွေ
ဆရာမောင်ဝဏ္ဏရဲ့ သမိန်ပေါသွပ် တို့ နောက် ဆရာသော်က ရဲ့ အရိုင်း တို့လို ကာတွန်းတွေကို လက်ကမချ ဖတ်တော့တာပဲ။
နေ့လည်စာ စားချိန်မှ အိမ်က လိုက်ခေါ်တယ်။
စားပြီးတာနဲ့ ပြန်သွားပြီး တစ်နေကုန် ဖတ်တယ်။
အဲဒါ မှတ်မိသလောက်လေးပဲ ပြောပြတာ ဒါထက် အများကြီး ကျန်သေးတယ်။
အဲသလို ဖတ်ရင်း နောက်ထပ် ဖတ်မိတဲ့ ကာတွန်းလုံးချင်းတွေကတော့
အချစ်ရုပ်ပြတွေပေါ့ဗျာ၊ နောက် အက်ရှင် ရုပ်ပြတွေ (အခုထိ မှတ်မိတာကတော့ ဒီရဲဂျာပဲ)
(အခုထိလဲ ရုပ်ပြတွေကတော့ ဖတ်တုန်း ဘာတွေလဲတော့ လာမမေးနဲ့ ပြောပြဘူး)
ဦးမာဃကို အဲဒီဘက်ကို စ သွင်းပေးတာကတော့ တာရာပွကြီး ပါပဲ (ကာတွန်း-ဝိဇ္ဇာပါခင်ဗျ)
အခုထိလဲ မှတ်မှတ်ရရ ရှိနေတုန်းပါ
နှာခေါင်းချွန်ချွန် မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ တာရာပွကြီးရဲ့ ပုံစံ နောက် သူ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ ပူပြင်းတို့ မိုးမြင့် တို့တတွေကိုပေါ့။
အဲဒီအထိ ကြားထဲကနေ အဆင့်တက်တာကတော့ မြန်သလား မမေးနဲ့ အဲဒါတွေကို ဦးမာဃ မူလတန်း အရွယ် (နှစ်တန်း သုံးတန်းလောက်မှာ) ဂျောင်းဂျောင်းပြေးအောင် ဖတ်နေပြီဗျ။
စာဖတ်ကလဲ ဘယ်လိုက ဘယ်လိုကို မြန်မှန်းမသိ
ရွယ်တူတွေနဲ့ ကျောင်းမှာ အတူတူများ ဖတ်လို့ကတော့ ဦးမာဃ စာတစ်မျက်နှာဖတ်ပြီး အတန်းကို တစ်ပတ်လောက် ပတ်ပြီးကာမှ သူတို့က နောက်တစ်မျက်နှာကို လှန်တုန်းပဲ ရှိသေးတဲ့အထိ။
သူတို့ပဲ နှေးတာလားကတော့ မပြောတတ်ဖူးပေါ့
ဒါပေသိ အခုထိလဲ အဲဒီလောက်ပါပဲဗျာ။
ထားပါလေ။ အဲဒါတွေက အရေးမကြီးပါဘူး (အမှန်ကတော့ တမင်ကို ကြွားတာရယ်)
ဦးမာဃတို့ ငယ်စဉ်က ကာတွန်းကို အရူးအမူးနီးပါး ဖတ်ခဲ့တယ် ဆိုတာ တွေ့နိုင်ပါတယ်နော့
နောက် အဲဒီအချိန်က ဦးမာဃတို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကာတွန်းတွေက လက်တစ်ကမ်းမှာတင် ရှိနေတာကိုး။
အဲ့ဒါလေးကို အခုခေတ် ကလေးတွေနဲ့ သွားလို့ ယှဉ်ထိုး မိပြန်တော့
အခုခေတ် ကလေးတွေ ကာတွန်းဖတ်တာ နည်းသွားသလို တွေးမိ၊ ခံစားမိပါတယ်။
တစ်ဖက်မှာ ကြည့်ပြန်တော့လဲ ကာတွန်းစာအုပ်လောက ကျသွားသလို ခံစားမိတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အတော်များများ ထွက်မလာတာကို တွေ့မိ၊မြင်မိနေလို့ပါ။
အခုနောက်ပိုင်း နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ အပတ်စဉ် ကာတွန်းစာစောင်တွေ ရှိနေပေမင့် အတွေ့ရ နည်းသွားသလိုပဲလေ။
ကိုယ့် ပတ်ဝန်းကျင်ကပဲ ကလေးတွေ နည်းသွားတာကြောင့်များလားလို့ ကြည့်ပြန်တော့လဲ မဟုတ်ပြန်ဘူး။
ဒါကြောင့် တွေးမိတာကတော့ ကလေးတွေ ကာတွန်း အဖတ် နည်းသွားတယ် ဆိုတာပါပဲ။
အခု ကလေးတွေက ဦးမာဃတို့လို ငြိမ်ပြီးတော့လဲ စာမဖတ်၊ ပြေးကာ လွှားကာရယ်လဲ ဆော့တာ နည်းသဗျို့။
သူတို့လေးတွေ အတွက် ဆော့စရာ smartphone တွေ၊computer တွေပဲ များလာလို့လားတော့ မပြောတတ်။
အခု ဦးမာဃ ပြောတာ ကာတွန်းရုပ်ပြ၊ ကာတွန်းဇာတ်လမ်းတွေကို ပြောတာနော်။
ကာတွန်းကားတွေ ထုတ်လုပ်ရာမှာလဲ မြန်မာတွေဟာ အတော်တော့ လိုပါသေးတယ်။
ဟိုအရင်နှစ်တွေက animation studio တွေ၊ မြန်မာကာတွန်းဇာတ်ကားတွေ အလုံးအရင်း ထွက်ခဲ့ဖူးပေမင့်
ပျက်စီးနေတဲ့ ဗီဒီယိုလောကနဲ့ ခိုးကူးတွေကြောင့်
တောက်မည့်မီးခဲ ရေနဲ့တွဲမိသလို ဖြစ်သွားတာတွေကိုလဲ စိတ်မသက်မသာ တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
အဲဒါဟာ မြန်မာကာတွန်းလောက အတွက် ဆုံးရှုံးမှု ကြီးမားစေတယ် ဆိုတာကိုလဲ မပြောချင်ဘဲ ပြောရပါဦးမယ်။
ဆိုတော့ အဓိက အကြောင်းကို ပြန်ဆက်ရမယ်ဆိုရင်
ကာတွန်းလောက ကျဆင်းနေပြီဆိုတာကလဲ ဦးမာဃရဲ့ ကိုယ်ပိုင် သီးသန့် အမြင်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
(ရှေ့ တိုးမယ့်ဆင် နောက်တစ်လှမ်း ဆုတ်တာမျိုးကလဲ ရှိနိုင်သေးတာမို့)
ဦးမာဃ တင်ပြတာလေးတွေကို အလိုမကျ စနိုးစနောင့် ဖြစ်မိတယ် ဆိုရင်တော့
ဦးမာဃရဲ့ ငယ်စဉ်က ဘဝလေးကို တင်ပြတယ်လို့ပဲ သဘောထားလို့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးပဲ ဖတ်ပေးနိုင်ပါတယ် လို့ ပြောချင်မိပါတယ်နော်…………….။
နာ လဲ ရေးမို့ကို။
ကျုပ်နဲ့ ကျုပ်မောင်နဲ့ဆို စာအုပ် စုံ ဖတ်ခဲ့တာပေါ့။
အဲဒီတုန်းက ရာဇဝင်တို့ ဘုရားလောင်း ဇာတ်တော်တွေ တို့လည်း ကာတွန်းထွက်တယ်။
သဂျားက ကျုပ်ထက် အသက်အများကြီးငယ်တာကို ဒီ ကာတွန်းခေတ်မှီတယ်ဆိုတော့ မဆိုးဘူးပြောရမယ်။
ကလေးကာတွန်းက စ လူကြီးကာတွန်းထိ အကုန်ဖတ်ဖြစ်တယ်။
ထွန်းဝင်းလတ် စတာတွေက လူကြီးကာတွန်းတွေလေ။
ဒါမျိုး အတိတ်ကို ပြောနေရရင် ပျော်လွန်းလို့ပါ။
အိုက်ဒါ အကုန် ဖတ်ဖူးတယ်
ပြောပါတယ် တွေ့သမျှ စာအုပ် ဆွဲဖတ်တာပါဆိုမှ
အဲဒါ အကုန် ဖတ်တာ
ချွင်းချက်- စံရွှေမြင့် မပါ
အနှီ လူဂျီး ကာတွန်း ဆိုတာဒွေက အသက်ရလာတော့ မဖတ်တော့ဘူး ဖီးလ် ကွေး လို့ …
ဘယ့်နှယ့်ဗျာ ..တာမနေတာ လည်း မနေရ အင်ဒီပန်းနန့်ဒေးလည်း ချမ်းသာမပေး ကွန်အဲယား လည်း
ဒဲ့ ကောက်ကတ်ဆော်တာတွေ သိလာလို့ …
စကားမစပ် Forrest Gump ပြန်ကျိ ဖြစ်တယ်.. stupid is as stupid does ဆိုတဲ့လက်သုံးစကားလေ..
အတော်ကောင်းသဗျာ..ဒီအရွယ်မှာ ပြန်ကြည့်မိတာ …
ငယ်တုန်းက ကြည့်စဉ်က အဲ့လောက် အရသာမရှိဖူးဘူး ..။ ဒီတပါတ် Saving Private Ryan ပြန်ကျိအူးမယ်..
ဒါပီးရင် cast away.. ဒီလတော့ တွမ်ဟန့်ခ်စ် ပြန်တူးတဲ့လပဲ..
ကျန်သေးဒယ်.. စိုင်းဗေဒါဆိုတဲ့ဆြာ .. Crying Freeman ရဲ့ ကျောရိုး ဂျပန်ကာတွန်းကို ခပ်တည်တည်
မြန်မာစာတန်းထိုးပီး လုပ်စားတာ ၁၁အုပ်မှာ ၁အုပ်စာလောက်ပဲ လက်နဲ့ ရေးတာရယ်.. ။ ချဉ်ပါ့..။
ဒီစာရင်းထဲကျန်သွားတာ အာကာမင်း ဆိုတဲ့ဆြာ ..နောက်ပိုင်း ကလောင်မူပိုင် ဘာညာ ညိတယ်ထင့်
အာကာမင်းမင်း ဖြစ်သွားတယ်… ကျော်လည်း ဆက်မဖတ်တော့ဘု… ချဉ်ထှာ။
ကတွတ်ပီကော စမ်းအူးမလား နိုင်ငံခြား ဇာတ်လမ်း တွေ ကျောရိုး သော်၎င်း ဒဲ့သော်၎င်း သမတာပဲ…။
အဲ့.. တခုပဲ ..သူက ဗဟုသုတ အနေနဲ့ တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့ အကြောင်းလေးတွေ ညှပ်ညှပ်ရေးတတ်တာလေး..။
အဲ့တုန်းက နေရှင်နယ် ဂျီအိုဂရပ်ဖစ် တို့ ၀ီကီတို့ ဘယ်နားနေမှန်းမသိ ဆိုတော့ ..အဲ့ဒါလေးတော့ ပညာရသပေါ့ဗျာ..။
အနှစ်သက်ဆုံး ကာတွန်းဇာတ်ကောင်ကို ပြောပါဆိုရင်တော့ သမိန်ပေါသွပ် ပါပဲ။
နာ အကြိုက်ဆုံးက မောင်မောင်ဇာ ပဲ။
အာကာမင်းက စီနီရာအကျဆုံးးးးပဲ။ နောက်မှ အာကာမင်းမင်းဖြစ်တာ။
ဒီရဲဂျာ နဲ့ ရာမာဖုံ အတွဲတုန်းက အသေစွဲလန်းခဲ့ရတာ။
ရာမာဖုံ ဆိုတာ 山本 ဒါဖြစ်လိမ့်မယ်…အဲ့ဒိဆြာ ဂျပန်စာ ဘိဒဂတ် အိုးကွဲနေမှာ ..
ခက်တာက အနှီ စာလုံးကို ဘယ်ဂငယ်မှ ရာမာဖုံ လို့ မဖတ်ဘူး ရာမာမိုတို ပဲ ဖတ်တယ်
本 ဆိုတာက စိနသံ (ဂျပန်အယူ) နဲ့ ထွက်ရင် -fon, -hon, -bon ကိုး .. ခွန်းယော်မိ ခေါ်တဲ့
ဂျပန်လေကျ နဲ့ဖတ်မှ မိုတို လို့ထွက်တာ .. ဆိုတော့ ဆြာသမား ကြည့်ဖြီး မှန်းတီး ဗလိုင်းရွှီး လိုက်တယ်ထင်ပါ့..
ကူးတာ လို့ ပြောရမလား
ဆရာကြီး ရွှေဥဒေါင်းလို မှီးတယ်လို့ ပြောသင့်သလား
ဆရာကြီးတို့ခေတ်နဲ့ မနှုင်းစကောင်းဘူးဗျ. ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဟိုခေတ်က မြေစမ်းခရမ်းပျိုးရတာကိုးး
ဒီဘက်ကဆြာတွေ ကတော့. အလွယ်လုပ်ကြတာပါ.
တကယ်က ၂ ပိုင်းခွဲကြည့်နိုင်တယ်ဗျ. ဥပမာဗျာ တွတ်ပီ ဆို ကာရိုက်တာ အသေ. ဘယ်ဇာတ်ပဲလာလာ
ကြုံတိုင်းရွာသား မသေးမျှင်ယောက်ျား ဗိုက်ကလေးယောက်ဖ.
အဲ့ ဒီရဲဂျာတို့ကျတော့ တဇာတ်ကို တကာရိုက်တာ. ဒီဇာတ်မှာ စုံထောက်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်
နောက်ဇာတ်မှာ စပိုင်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်. အဲ့လို.
ဆိုတော့ ကာရိုက်တာ ကိုင်ရေးရတာ ပိုခက်တယ် ပိုမြင့်တယ် မြင်မိရဲ့ဗျို့.
ကိုယ့်ခတ်ကွင်း အဝန်းအဝိုင်းနဲ့ ကိုး. မှီးတာကိုလည်း. ကာရိုက်တာကို
ဗမာနာမည်လောက် ပြင်ရေးတာမျိုးထက် လည်း ပိုလေးစားမိပြန်ပါရဲ့.
တကယ်တော့ ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးတာပဲ အကောင်းဆုံးဗျ. ထိပ်ဆုံး ဖန်တီးယူတဲ့အချိန်ကျရင်တော့.
မှီငြမ်းရတာတွေ အရိပ်ထိုးတာတွေ သြဇာသက်တာတွေ ပါမပေါ့ဗျာ.
ဥပမာ ဂျက်စပဲရိုး ဆို ရိုးလင်းစတုန်း ဂီတာသမားရဲ့ ဟန်တချို့ ယူထားတယ်.
ဆောလစ် စနိပ် ဆိုရင် ဗန်ဒိန်းနဲ့ တခြားမော်ဒယ်တယောက်ရဲ့ ကာရိုက်တာကို သမ ထားတာဗျ.
သို့သော် သူတို့အားလုံးတော့ ကိုယ်ပိုင်ဟန် ရှိကြပါတယ်.
Good artists copy. Best artists steal.
အခု ကျုပ် ကော့မစ် လောက ကိုခနခနခလုပ်တိုက်နေမိတယ်.
တခြားကြောင့်တော့မဟုတ်ဘူး. ဆြာသမားတယောက်က ဂျာနယ်လုပ်တော့ နာရူတို ကို မူပိုင်ဝယ်ပီး ပြည်တွင်း
ဖြန့်ချင်တယ် ဆိုလာလို့ရယ်. လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်ကျော်လောက်ကပါ. အဆင်မပြေခဲ့ဘူး. အဲ့သည့်မှာ ကိုယ်လည်း
ကာတွန်း အာနီမီ ဘက် နည်းနည်းပြန်ကြည့်မိရင်း. တွေ့လာတာတွေ ဆိုပါတော့.
သူရို့ဆီမှာလည်း ရုပ်ပြက စသဗျ. လူအားပေးလာရင် အာနီမေးရှင်း လိုက်ရိုက်လာတယ်.
အောင်မြင်တဲ့အခါ ရုပ်ရှင်ကားကြီး ကိုတောင်တချို့ ကူးကြတယ်. ကြားထဲမတော့ သော့ချိတ် ဖုန်းကာဗာ တီရှပ် ကွန်ပါဗူး
မျိုးစုံ အနှီ ကာရိုက်တာတွေ နဲ့ ထုံးမွှမ်းပြီး ရောင်းစားကြတော့တာပါပဲ. နောက်ပိုင်းမှာ ဂိမ်းတို့ အရုပ်တို့ လိုက်လာတယ်
ဧရာမ စီးပွားရေးကြီး ကို ဖြစ်နေတော့ပါပဲဗျာ. ကျုပ်တို့ဆီမှာက စာအုပ်လောက်နဲ့ရပ် မသကာ လွန်ရောကျွံရော အချဉ်ထုပ်လောက်
ဖြစ် ဆိုတော့လည်း. ကြားထဲ သူများအောင်မြင်ရင် ဆင်တူရိုးမှား ကူလီကူမာ ကလုပ်လိုက်အုံး.
အစ ပိုင်း က အဟုတ်။
နောက်ပိုင်း မသိခင်ကလည်း အဟုတ်။
နိုင်ငံခြားရုပ်ရှင်တွေ ပြန်ကြည့်ဖြစ်မှ “ဟင်! ဒီ ဇာတ်လမ်းကို သိသလိုလို” “ဒီ ဇာတ်ကွက်မျိုး ကြားဖူးသလိုလို” ဖြစ်တာ။
မင်းသားထဲ နှာခေါင်းနဲ့ မကြည့်ပဲ လုံးဝ ကြိုက်တာ သူ့ပဲရှိတယ်။ ငိငိငိ.။
မျက်လုံးလေး ကြည့်ပြီး ငိုချင်တော့တာပဲ။
3) Green Miles (one of my fav movies)
5) Appolo 13
တွမ်ဟန့်ခ်စ် ပြန်တူးတဲ့လ ဆိုရင်ဖြင့် “You’ve got mail” လေးပါ ပါပစေနော။
Meg Ryan ကလဲ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။
အဲ့ကားက facebook era မှာ ရီဇယာကြီးဗျာ..
တွမ်ဟန်ခ် ပြန်တူးရင် Da Vinci Code လေးလဲ မဆိုးဘူးဗျ..
ဒါဗင်ချီကုဒ် နဲ့ အိန်ဂျယ် အင်န် ဒမန် က သူအဆဲခံရဆုံးကားတွေခည..။
ကာရိုက်တာ မပီ လို့ တဲ့ ..။ ဟုတ်တော့လည်း ဟုတ်တယ် ၀ှက်စာဖော်တဲ့ ပါမောက္ခရုပ် မပေါက်ဘူးရယ်..။
ဒါမျိုးကျ Dean Corso လို အခွက်မျိုးမှ လိုက်တာကလား ..။
အေးဟုတ်တယ်။ ကေဇီပြောမှမှတ်မိတယ်။ ဒီရဲဂျာ
ထွန်းဝင်းလတ် ကိုပိုကြိုက်တယ်။ လွမ်းတာအေ
အခုဆို ဘယ်သွား ရှာရပ
ထွန်းဝင်းလတ် မဟုတ်ပဲ ထွန်းမင်းလတ် ထင်တယ်။
ဒီရဲဂျာ ဆွဲတဲ့ ဆြာသမား ကလောင်နာမည်က မြင့်အိုတူး တဲ့ … မြင့်ဦး ပေါ့ဗျာ … နာမည်နဲ့တင် ကန်မီကယ်ကျောင်းသားမှန်းသိအောင်
လုပ်ထားတာလေ..။ သူ့ ဇာတ်လိုက်တွေက ယောက်ျားလေးဆို မျက်ခုံးမျက်လုံး ဆွဲတာ သိပ်ပီတယ်…
အမျိုးသမီး ဇာတ်ကောင်ဒွေကျပြန်တော့ မေးဖျားမှာ မှည့်ကလေး တလုံး ပါတတ်တယ်…
ဘာဂျောင့် ကြွေသလဲ သိဒယ်ဟုတ်…ဒချိဒချိ..
အဲဒီ မှဲ့ကလေးကိုပဲ စွဲနေတယ်ပေါ့
ဘယ်လိုပဲ ပြောပြော… ငယ်ငယ်က ဒီရဲဂျာဖြစ်ချင်လို့… ၀ိတ် မ ရ တာ အမော… ကြီးလာရင် ဘာလုပ်မလဲ မေးရင် ကြေးစား လူသတ်သမား ဖြစ်ချင်လို့ ဖြေတဲ့ အထိပဲ… တအုပ်ထဲမှာဆိုရင် ကွန်တင်နာကားကို သူက မောင်းတယ်… သေနတ်က အမိုးမှာ အမြဲပါတယ်… လိုက်ပြီး လူသတ်တာ.. ဟဲ…
ကွန်ဖူး သုံးဖော်လဲ မချန်ထားခဲ့နဲ့ဦး… အကြိုက်ဆုံး နဲ့ အမှတ်အရဆုံးက ပြောင်ရှင်းရဲ့ တက်စီပဲ…
တို့ လည်း တာရာပွကြီးတို့ဇာတ်လမ်းတွေ ကြိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ကွယ်
အခုတော့လည်း . . . .
ကာတွန်းပြခန်း ဆိုပြီး လုပ်ရင်
ပြီးရင် သားက စပဲ စတတ်တာ။
ဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အပြောနဲ့ သဂျားခေါင်းပေါ် ရောက်ဦးမယ် အလက်ဆင်းလေးးးးး
ကာတွန်းမဆွဲ ပါနဲ့ ။ ဆွဲတတ်တဲ့သူတွေ ဆွဲထားတာလေးတွေကို စုမယ်ဆောင်းမယ် ။
အစ ပျိုးထားတာကို အခြေခိုင်အောင် လုပ်ပါဦး ကိုရင် ဒညင်းဝက်ရေ
နှိုင်းယှဉ်ပြရရင် ရွှေသွေး၊ တေဇ ရှေးဟောင်း ဗားရှင်း (၁၉၇၀ ဝန်းကျင်) တွေက တကယ်ကို အဆင့်မြင့်ပါတယ်။
ဒီနောက်ပိုင်း ထွက်လာတာတွေ ကတော့ အဲဒါတွေ နဲ့ ယှဉ်ရင် ဘာမှ မဆိုင်ဘူး။
အဲဒီတုန်းက ဆရာကြီး ဦးဘကြည် လက်ရာ တွေပေါ့။
ကလေးတစ်စု မှော်နာရီ (အခုဆို Time Machine ခေါ်မလား) ကြီးကို သွားဆော့မိပြီး အသက်တွေ ကြီးကုန်တာ ပြန်ပြီး ငယ်အောင် လုပ်ကြရတာ တွေ။
နောက်ပိုင်း မိုးသောက်ပန်း ကလဲ အမြင်ဆန်း ဖတ်လို့ ကောင်းတယ်။
အခုတော့ ပျောက်သွားပြီလား မသိ။
ကာတွန်း မောင်မောင် ရဲ့ ကာတွန်းတွေ လဲ ရှိသေးတယ်။သူ့ဇာတ်ကောင် တစ်ကောင် ဘဲဥတော့ မှတ်မိတယ်။
အခုခေတ် ရှင်သန်ဆဲ ကာတွန်းထဲမှာတော့ ပိုးဇာရဲ့ မောင်မောင်ဇာ ကို သဘော အတွေ့ဆုံးဘဲ။
ရွာထဲမလဲ မောင်မောင်ဇာ တွေ အများသားနော။
ဖိုးသိကြား ကိုယ်တိုင်လဲ လေးဇာ များ ဖြစ်နေလေရော့သလား။
စာဖတ်တတ်စ ကလေး အဲဒါတွေနဲ့ သွား တိုးတာမို့
ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားလာတယ်လို့ပဲ ပြောရမလား
သူလဲ အင်္ဂလိပ်ကဏ္ဍ ပါတာပဲနော်။
ကာတွန်း မောင်မောင် ဆိုရင်
ဘဲဥ၊ မှုန်ကြီး၊ ကိုမှောင် အဲဒါတွေ မှတ်မိတယ်
ကျွန်တော်က လေးဇာတော့ ဖြစ်သေးပါဘူး
ဦးမာဃရဲ့ ဆောင်းပါးက ကောင်းလို့ ဝင်အားပေးလိုက်တယ်။ ဟုတ်တယ်ဗျ တကယ်တော့ ကာတွန်းဆိုတာ ကလေးစာပေပဲ။ အဲဒီစာပေကို သေသေချာချာ လုပ်ရင် ကလေးဘဝတည်းက စာဖတ်ကျင့် ရအောင်လုပ်ပေးလိုက်တာပဲ။ အမကြီး မခင်လတ်လည်း ဒီကာတွန်းကို ဖတ်ဖူးတာကိုး။ အဲဒီ အမကြီးပြောလိုက်တဲ့ ကာတွန်းဟာ ဟိုတုန်းက ရွှေသွေးအဟောင်းထဲမှာ ပါခဲ့တယ်။ ကျနော် မှတ်မိတာက ကလေးသုံးယောက်။ လူအိုရုပ်ပေါက်သွားကြတာ အဓိက လုပ်စရာရှိတာ မလုပ်ပဲ အချိန်ဖြုန်းလို့ ဆိုပြီး ဇတ်လမ်းဖွဲ့ထားတယ်။ အဲဒီမှာ ကျောက်ဂူထဲမှာ ရှိတဲ့ နာရီကြီးကို ပတ်ရေ ၉၀ ပြည့်အောင်လှည့်ကြရတာပဲ။ ကလေးတွေကို ပညာပေးချင်လို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆွဲထားတဲ့ ကာတွန်းလက်ရာက တော်တော့်ကို ကောင်းတယ်။ အမကြီး ပြောတာ အမှန်ပဲ။ အဲဒီတုန်းက ရွှေသွေးစာစောင်တွေက တော်တော်ကောင်းတယ်။ ကျနော့်အဖေက ကျနော့်ကို ငယ်ငယ်တည်းက အဲဒီရွှေသွေး အဟောင်းတွေကို အပတ်စဉ်ယူပြီး တနှစ်စာ တနှစ်စာ စနစ်တကျ စာအုပ်ချုပ်ပေးပြီး အဖုံးမှာတောင် ကျနော်တို့ မောင်နှမတွေ နာမည်အတိုကောက်နဲ့ တံဆိပ်တုံးရိုက်လိုက်သေးတယ်။ ကလေးစာပေသာ ပြောတာ လူကြီးဖြစ်တဲ့ အထိဖတ်လို့မဝဘူး။ ကျနော် လူပျိုပေါက် ဘဝအထိ ရှိနေသေးတယ်။ စနစ်တကျ စာအုပ်ချုပ်ထားတာကိုး။ အဲဒါ နောက်တော့ ကျောင်းပိတ်တိုင်း ကျနော့်ညီဝမ်းကွဲလေးက အ်ိမ်လာလည်တာနဲ့ အဲဒီစာအုပ်တွေ တနေကုန် ဖတ်တော့တာပဲ။ အဲဒါ တနေ့တော့ အမေက သူ့တူကို လှမ်းခေါ်တာ မကြားလို့ ဘာလုပ်နေတာလည်း ကြည့်တော့ ကာတွန်းဖတ်နေမှန်းလည်း သိရော ဒေါပွပြီး အဲဒီစာအုပ်အဟောင်းကြီးတွေကို အမျိုးတယောက်ကို ခေါ်ပေးလိုက်တာ အခုတော့ သေသေချာချာ မသိမ်းလို့ ပျက်စီးကုန်ပြီ။ ကျနော့်မှာ နှမြောလိုက်ရတာ။
အဲဒီ ခေတ်တုန်းက တွတ်ပီက ရွှေသွေးမှာ စရေးနေပြီ။ ကလောင်သစ်လေးပေါ့။ မသေးမျှင်နဲ့ ဗိုက်ကလေးလည်း ပါတယ်။ စောတင်မောင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ရိုးရိုး မုဆိုးကာတွန်းလေးတွေပဲ။ ဗိုက်ကလေးဟာ မသေးမျှင်ရဲ့ မောင်တို့ တွတ်ပီနဲ့ သမီးယောက်ဖတို့ ဘာတို့တောင် မရေးသေးဘူး။ နောက်ကျမှ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဇတ်လမ်းကို ချဲ့လာတာ။ အဲဒီတုန်းက ပင်တိုင်ကာတွန်းတွေက မှတ်မိသလောက် မောင်ရိုး စိန်မျောက်မျောက် စိန်ပေါက်ပေါက် မုဆိုးကြီးဦးပေတလူတို့ ဘာတို့ပေါ့။ အဲဒီတုန်းက မှတ်မိသလောက် တို့တာဝန် အရေးသုံးပါးတို့ ဘာတို့ မထည့်သေးဘူး။ တကယ့်ကို သန့်သန့်လေးပဲ။
ဆရာ ဆွေမင်း ရွှေသွေးမှာ စရေးတာကိုတော့ မမီလိုက်တော့ဘူးဗျ
ကျွန်တော်တို့ လူလားမြောက်တော့ တတိုင်းမွှေးနဲ့ သောကြာမှာ အပိုင်းဆက်နဲ့ ဖြစ်နေပါပေါ့။
အဲဒီ ပျောက်သွားတဲ့ စာစောင်တွေကိုတော့
အခုချိန် မင်္ဂလာမောင်မယ် စာအုပ်ဖတ်မိရင် အရင်လို
ကိုရွှေထူး(ပြည်) ကိုတော့ ဖတ်ဖြစ်နေတုန်းဘဲ…ရပ်ကွက်ထဲမှာဗျာ စီးရီးလေ..မိုက်စ်ဒယ်
လောလောဆယ် ကလေးဖတ်ဖို့ ပုတက်ဂျာနယ်က အန်းနရိုက် ဗားရှင်းနဲ့ ထုတ်ထားသတဲ့ ဂလက်စီနုတ်တူးက စပွန်ဆာပေးတယ်ဆိုလား ကြော်ငြာထားတာတွေ့မိတယ်
ဒါပေသိ အခု အိုက်ဒါကို ဖတ်ရင်
စဉ်းစားပြီး ပြောဦးမှ။ (မှတ်ဉာဏ်တွေ ပြန်တူးလိုက်မယ်)
၄) မြတ်ဆုမွန် အဲဒါတွေက စာစီစာကုံး ကိုယ်တိုင်ရေးဖို့ အချက်အလက်တွေ တွေ့သမျှမှတ်ရတာပေါ့အေ။
၆) နှင်းနှင်းလေးနဲ့ ရေမြင်းလေး
၉) ဦးကပ်စီး တို့ တိုင်းဂါးတို့
၂၀) ဦးမောင်တင့် စတဲ့ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေကို အစွဲလန်းဆုံးပဲ။
တကယ်မှတ်မိတာပဲအေ။ ကိုယ်တွေတောင် အိုက်လောက်မှတ်မိဘူးရယ်။ ကွန်ပူတာအုံးနှောက်ပဲ။ ကာတွန်းတွေ လွမ်းတာအေ
လူငယ်ခြေတက် ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တောင် မေ့တာ များနေပြီ
“မြ၀တီ၊ ငွေတာရီ၊ ဒို့ကျောင်းသား၊တေဇ ထွက်ပါပြီ” တဲ့…
နာ့ရဲ့ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် တစ်စွန်းတစ်စ ကို ယူသုံးထားလိုက်သေး …
နင်ဒေါ့ နာဂျင်ဘီ ထင်ဒယ် …
နာဂဒေါ့ ကာတွန်းတွေထဲ တွတ်ပီ ကိုပဲ အကြိုက်ဆုံး …
အဲ့ဒါ .. အဲ့ဒါ …. (ခွက်ဒစ် တူ ပေဂျီး)
ပို့ စ်ဖတ်အပြီး ချက်ချင်းမြင်ယောင်လိုက်မိတာကတော့..
ဂိမ်းဆိုင်သို့ လစ်ရန်သာ ချောင်းနေကြသော ရပ်ကွက်ထဲမှ ကလေးများ နှင့်
မည်သည့်အခါမှ လူပြတ်လေ့မရှိသည့် အနှီ ဂိမ်းဆိုင်များ ။
သုံးထပ်တိုက် တစ်တိုက်လုံး ကွန်ပျူတာ အပြည့်နဲ့
အဲ့ရှေ့မှာ ဆိုင်ကယ် ဘယ်တော့မှ မပြတ်
ဦးမာဃရေ… ကာတွန်းကိုတော့ ငယ်တုန်းကတင်မဟုတ်ဘူး။ အခုထိကို ကြိုက်တုန်းပဲ။ စာဖတ်ခြင်းကို ကာတွန်းနဲ့ စခဲ့တာဆိုတော့ ငယ်ချစ်ပေါ့နော်။ ဦးမာဃ ပြောလို့ ငယ်ငယ်တုန်းက ကာတွန်းခိုးဖတ်ခဲ့တာတွေတောင် သတိရသွားပြီ။
ငယ်ချစ်မှ ငယ်ချစ် စစ်စစ်
(သိကြားမင်းလဲ အိုက်ဒါတွေ ကြိုက်တယ် သိလား )
တဂျားမင်းရယ်။ ပြောမှပဲ ငယ်ငယ်က စွဲစွဲလမ်းလမ်းဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ကာတွန်းတွေလွမ်းတာအေ။ တေ ဇ ရွှေသွေး ကတော့လပေးယူတာ။ ဦးစိတ်တိုမျောက်ညို တို့ ဦးကပ်စီးတို့ ဦးစံရှားဦးဒိန်းဒေါင် တို့ ပြာဂလောင်ပြာ လချောင်၊ တွတ်ပီ၊ နောက်မေ့ကုန်ပီအေ။ အများကြီးပဲနော်။ တို့ဖတ်ခဲ့ရတာ။ နဲနဲကြီးတော့ နန်းဦးတို့ ဘာတို့။ ဒို့ခေတ်ကကြည့်စရာတီဗွီဆိုတာလဲ ည ၇ နာရီကနေ ၁၀ နာရီပဲလေအေ။ ပိုတဲ့အချိန်စာဖတ်ဖြစ်တာပေါ့။ အခုကတော့ကလေးတွေက တီဗွီ ကြိုက်တဲ့အချိန်ကြည့် ဂိမ်းဆိုတာကလဲ အချိန်ပြည့်ဆော့လို့ရနေတော့ စာဖတ်ချိန်နဲသွားတာပေါ့။ နောက်ကျောင်း ကျူရှင်ကလဲမိုးလင်း မိုးချုပ်ဆိုတော့အေ။ စာမဖတ်ချင်တော့ ဘူး ပေါ့။ အဆိုးဆုံးကတော့ အခုထွက်တဲ့ ပုတက်တို့ဘာတို့ ငါလဲဖတ်ကြည့်တယ်အေ။ ကလေးတွေမပြောနဲ့ လူကြီးတွေတောင်နားမလည်ဘူးအေ။ ပုံတွေကလဲ ကလေးကြိုက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိဘဲ ရှုပ်ထွေးနေ အောင်ဆွဲထားတာ။ ကလေးတွေကကျောင်း စာ တွေနဲ့စိတ်ရှုပ်နေရတဲ့ကြားထဲ သူ့ပုံတွေစာတွေက ရှုပ်နေတော့ စိတ်မ၀င်စား တော့တာလို့ထင် တယ်အေ။ နောက် အခုထွက်တဲ့ကာတွန်းတွေကလဲ ကိုယ်ပိုင်တီထွင်တာ မဟုတ်တော့ပဲ အခွေတွေကိုမှီးချတာဆိုတော့ ကလေးတွေက အခွေပဲကြည့်တော့တာပေါ့။ ဒို့ငယ်ငယ်တုန်းက ကာတွန်းမျိုးတွေသာပြန်ထွက်ရင် အခုကလေးတွေလဲသေချာပေါက်ကြိုက်မှာပဲ။ ကာတွန်းအသစ်တွေ ထက် အရင်အဟောင်းတွေပြန်ထုပ်နိုင်ရင်ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်အေ။ ပညာလဲရ စိတ်လဲပေါ့ပါး ဆိုရင် ကလေးတွေဖတ်ဖြစ်မှာပါ။ ပြန်ဖတ်ချင်တယ်အေ ငယ်ငယ်ကကာတွန်းတွေ။ သားကိုလဲဖတ်စေချင်တယ်။ ဘယ်မှာများပြန်ရနိုင်မလဲမသိဘူးနော်။
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကလဲ ကျူရှင် တက်တာပဲလေ
ဒါပေသိ မျောက်ရှုံးအောင်လဲ ဆော့တယ်
အခု အဲဒီဘက်က တကယ် ဆုတ်ယုတ်လာတယ်ဗျာ
ကလေးတွေကို စာထိုင် ဖတ်စေချင်ပါဘိ
ဒီနေ့ပဲ တော်ဝင်စင်တာက Tab Book Center ကိုရောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ ရွှေသွေးပေါင်းချုပ်စာ အုပ်တွေ့ခဲ့တယ်တော့။ အရင်ကရွှေသွေးတွေကို A3 ဆိုဒ်နဲ့ ပြန်ပြီးကာလာနဲ့ ထုပ်ထားပြီးပေါင်းချုပ် လုပ်ရောင်းနေတာတွေ့ခဲ့တယ်။ အထူအပါးပေါ်မူတည်ပြီး ၁၅၀၀၀ မှ ၂၀၀၀၀ တဲ့။ နောက်နေ့မှ သွားဝယ်အုံးမယ်အေ။ လွမ်းတာ။ ပြန်ကိုဖတ်အုံးမှာ။
နောက်မျိုးဆက်ကို လက်ဆင့်ကမ်းလို့ ရပီ
ငယ်ငယ်ကအကြိုက်ဆုံးကတော့ ပိုးဇာ(လေးမွန်၊ထွေးမွန်)၊နဲ့ ဘယ်ကျော်(သူရ)၊။
ရုပ်ပြမှာတော့ တွမ်ခရုစ်ကားအကုန်နီးပါးနဲ့နိုင်ငံခြားကားပေါင်းစုံကိုရေးတဲ့ အာကာမင်းမင်းလည်းဖတ်တာပဲ။
ဖတ်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ အဆင်ပြေသား(နောက်တာပါ အက်ဂလိုလုပ်တာကောင်းပါဘူး)
နော်တူးအောင်ကတော့ ဘတ်ဂရောင်းတွေခိုလွန်းလို့ မကြိုက်ဘူး။
စိတ်ရှည်လက်ရှည်ဘတ်ဂရောင်းလှလှ၊ဖက်ရှင်လှလှနဲ့ဆွဲပေးတဲ့ ဆရာတင်မောင်ဝင်း(နေပိုင်) ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ။
ကိုယ့်ဦးလေးနဲ့မယားညီကိုတော်တဲ့ ဆရာမြိတ်ဝင်းထိန်ရဲ့ပန်းချီရုပ်ပြတွေကိုသဘောကျပေမယ့် သိပ်မမှီလိုက်ဘူး။
ငယ်ငယ်တည်းက ခုနှစ်အုပ်၊ရှစ်အုပ်၊ဆယ်အုပ် လောက်ကိုငှားပြီး
အခု ဒီစာ ရေးဖြစ်တာမှာ
ယောက္ခမ တင်တဲ့ ပုံလေးကြောင့်လဲ ပါပါတယ်
အဲဒီစာအုပ် မပြီးမချင်း မထတော့ဘူးပဲ
ပြောရရင်တော့… ငယ်ဘဝ ဆရာကြီး ဦးဘကြည်ရဲ့ ဇာတ်တော်ကြီးဆယ်ဘွဲ့က စ စွဲတာပဲ…
မိဘများက စာဖတ်တာအားပေးလေတော့ ရွှေသွေး၊ တေဇ၊ ဒို့ကျောင်းသား၊ မြဝတီ စုံလို့ပေါ့ဗျာ…
ကာတွန်းကနေ ပန်းချီမြိတ်ဝင်းထိန်တို့ ပန်းချီကိုကိုဝင်း (နေကျောက်ခဲ)တို့ ခေတ်ကိုရောက်တော့…
ပေး မဖတ်တော့ဘူး… အဲဒါ လူကြီးကာတွန်းဖြစ်သွားပြီတဲ့…
ဦးကပ်စီး တူတော်မောင် ခင်မောင်သိန်းထွန်းဝင်းနဲ့ တီထွင်ပါရဂူ ဖိုးဆိတ်ဖြူတော့ အလွမ်းသား…
အသိဉာဏ်တိုးမည့် ခလေးဖတ်စာပေတွေ ထွန်းကားစေချင်စမ်းပါဘိ…
တွေ့တာ အကုန် ဆွဲဖတ်တာ
အဲဒါတွေ ကြုံရင် ရေးပါဦးမယ်လေ
ဦးကျောက် အဲ့စာအုပ်တွေ ရှိသေးရင် သိမ်းထား သိလား
ရှေးဟောင်းပစ္စည်း ဖြစ်လုဆဲဆဲ ဖြစ်နေပြီ
ဒို့ရွာသားကြီး ကထူးဆန်းနဲ့ ခင်ချောစွိ ကိုတော့ သတိမရကြဘူးပေါ့လေ။
ဒေါ်လေး ပြောတာ ခင်ဂွမ်းဂွိလား ဟင်
ပြာဂလောင် ပြာလချောင်တို့ အဖေနဲ့ အမေလေ။
အခု မန်းကီးကော်ဖီမစ် ကြော်ငြာပါ။
တောင်ပုလု မြို့စားကြီး သမီးရှင်ဂွမ်းဂွိက သမိန်ပေါသွတ်ရည်းစားလေ။(မောင်ဝဏ္ဏဆွဲတာ)
ကထူးဆန်းနဲ့ ခင်ချောဆွိ အကြောင်းပြောတော့…
အဲ့… ကထူးဆန်းရော… ခင်ချောဆွိရော… ကိုလေးပွရော… အကုန်လုံးအပြင်မှာ တကယ်ရှိပါတယ်တဲ့…
ဘဇာကြောင့် မချင့်မရဲ ဖြစ်ပါသနည်း….
သူခိုးကြီး ငတက်ဖျား လည်းရှိသေးတယ်။
နယ်ကအိမ်မှာ တေဇ အဟောင်း၊ရွှေသွေးအဟောင်း၊ဒို့ကျောင်းသား၊တိုင်းရင်းမေ၊ငွေတာရီ၊မြ၀တီ၊မိုးဝေ၊တွေရှိသေးတယ်။
စာအုပ်ငှားချင် ကျုပ်နယ်ကအိမ်ကို ရောက်အောင်သွားကြအေ။
ခင်ခက်ခက်ခေါ အဘရဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်နဲ့ ကပ်လျက်အိမ်လို့ မေးသွား။
” ညွတ်ချွာဖျား ”
လို့ အမြဲယောင်တတ်တဲ့ သူ့ ကို
မိုက်မိုက်ပြည် (ဘ၀သရုပ်ဖော် ပညာပေး)
ကာတွန်းမောင်မောင်လေး (ဇာတ်ကောင် ကွီ၊ ပရုပ်ဆီ၊ နင်းပြား၊ငပြည့်)
မောင်လွင် (ငတက်ဖျား မြောက်နီတာ)
အဲဒါပဲ လက်ရှိ မှတ်မိတော့သဗျ
ဇာတ်ကောင်နဲ့ ကာတွန်းဆရာနဲ့ မတွဲမိတာဗျို့
ဆိုတော့ ဆြာ့ ဆြာဂျီးများ
ဆြာ့ ဆြာ ငယ်များ ….
၀ိကီပိုင်တဲ့ ဆြာများ ….
ခင်ညားတို့ ဟက်ဒစ်တွေ မမိုးရီတွေ … ဘာညာသရကာတွေမှာ … မရှိသော်လည်း ..
ကာတွန်းဦးဘဂျမ်း အကြောင်းလေးတော့ … မမေ့စကောင်း ..
တူးဆွကောင်းတယ် ရယ်လေဗျာ ….
ဟိုတလောကတောင် ကြော်ငြာတခု ဘာတဲ့ ခွေးတံဆိပ်ဆိုလား
ဒါမျိုး တူးဂျပါဗျ ..
အဲ့ဒီ ကြော်ငြာကို ကြည့်ပြီး မျက်စိလည်နေတာ
ဦးဘဂျမ်း လား ဆိုတာကိုဗျို့
(စကားမစပ် ခရက်ဒစ်ရော ပေးရဲ့လားမသိ)
ခေါက နည်းနည်းကြမ်းဒယ် …
ခေါက ခေါပဲဟာကို ဟာကို
ပြာဂလောင်၊ ပြာလချောင် ကိုအကြိုက်ဆုံးဘဲ
ပြီးတော့လေသဂျား. ဟိုကာတွန်း နာမည်မေ့နေလို့
အဲ့ဒီဇာတ်ဆောင်နာမည် မေ့နေလို့ နင်နဲ့လည်းတူတယ်လေဟယ်..
ကာတွန်းဆရာက ကျော်စံကေး ထင်ပါ့..
ဦးဗြဲလရမ်း ဒေါ်ဗလပွ တို့ရဲ့သား ဗရမ်းဗတာ ဆိုတာ
ကိုလည်း ဆွဲသေးတယ် ထင်တယ်။ ကာတွန်း ဌေးဝင်းဇော်ရဲ့
ဖီးကြမ်း သီးမွှေး လည်း သတိရမိတယ်။
ဖီးကြမ်း သီးမွှေး ရဲ့ ကျောက်ခေတ်ပုံစံကိုတော့ သတိရဆဲပါ
စကားမစပ် ကျုပ် ဦးပြောင်ရှင်းနဲ့တော့ တူဘူး နော့
နာမည်ပဲ ပြောရင် ရတယ်
တူမတူ ပြောစရာမလိုဘူး သိလား
P.S အဲ့လောက်လဲ ပြောင်သေးဘူးရယ်
ဒီရဲဂျာပါ။ မနေ့က အာကာမင်းမင်းလို့မှာရေးမိလို့ :p
နဖူးပြောင်မှာ လေယာဉ်ဝဲနေတာ ဦးပြောင်ရှင်းလေ၊ ကာတွန်းဆရာက ကျော်စံကေးမှတ်တယ်၊ ကောက်ချိတ် ရေးတဲ့ ဌေးဝင်းရောပါဘူးလား၊ ဆရာကြီး ရမ်းဖြီးတို့ ဖီးကြမ်း သီးမွှေးတို့လေ၊ ကြီးမှ ဖလင်စတုန်း ကူးထားမှန်းသိတာ၊ မိုက်တာပဲဗျ၊ ညတ်ချွာဖြားလို့ အော်တတ်တဲ့ ငတက်ပြား ထဲက ကောင်မလေးတွေ ကြိုက်တာဗျ၊ နှာခေါင်းလေးကို ချွန်နေအောင်ဆွဲတာ မိုက်တယ်၊ ခဲနဲ့ ရှေးပုံတွေ ရေးတတ်တဲ့ ကာတွန်းဆရာ တစ်ယောက်ရှိတယ်လေ၊ နံမယ်တော့ မေ့သွားပြီ ၊လုံးဝ မှုန်နေအောင် အကုန်အပြည့် အသားအရေ ပါချယ်တာ တော်တော်ကောင်းတယ်၊ တကယ့်ပန်းချီ ဆရာဖြစ်မယ်၊ သူတို့ဆို သိပ်တောင် မထွက်လိုက်ရဘူး၊ ပြောရင်း မောင်တီထွင်တို့ ဖိုးဆိတ်ဖြူတို့ လွမ်းတာ၊သူတို့ကြောင့် အင်ဂျင်နီယာ ဘက်ကိုစိတ်ပါတာနေမှာဗျ၊
နောင်တစ်ချိန်အတွက် ရည်မှန်းချက်တွေကိုလဲ ဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်
စူးစမ်းလေ့လာချင်စိတ်ကိုလဲ နှိုးဆွပေးတာ ကိုယ်တွေ့ပါဗျာ
အရင်ဆုံးပြောချင်တာက နီက လူနဲ့ စာနဲ့ မလိုက်ဝူး..နီ့စာကို ဖတ်ရင် အသက် (၄၀) ကျော်.. ကလေးအဖေကိုပြေးပြေးမြင်တယ်..အဟိ…
နာကြိုက်တဲ့ကာတွန်းတွေကတော့ မိမန်းလေး၊ ၀ိဇ္ဇာ၊ တွတ်ပီ၊ အဲ..အချစ်ကာတွန်းဆိုရင် သက်ပိုင်ရဲ…
မှန်တိုင်းပြောရရင်..နာက ကာတွန်းဖတ်တာနည်းတယ်..၀တ္ထုတွေပဲ ဖတ်တာ..အမေမသိအောင် ခိုးဖတ်တယ်… နောက်ကျ ငါဖတ်တာက ဟိုလိုဝတ္ထုတွေမဟုတ်တော့ အမေက ဘာမှမပြောတော့ဝူး..တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်နဲ့ဖတ်တယ်… ကာတွန်းက မောင်လေးငှားလာရင် ဖတ်လိုက်တယ်…
ဒါဆို ကျုပ်ရေးတာ အတော်မိုက်တာပဲ
ဟိုလို ဝတ္ထု ဆိုတာ
ကွိစိကွစ အချစ်ဝတ္ထုတွေကို ပြောတာဟဲ့..ပိန်းပါ့..
ကျုပ်တို့ သိတာ အဲ့ဒါ ဟုတ်ဖူး
အောင်ရှိန်၊ သန်းကြွယ် စတဲ့ ဆရာကြီးတွေ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်တွေနဲ့ ခလေးဘွ ဖြတ်သန်းလာတာဗျ…ကာတွန်းပိုးဇာဆိုလည်း ကြိုက်မှကြိုက်.. ကာတွန်းမောင်ဝဏ္ဏရဲ့ သမိန်ပေါသွပ်ဆို တခေတ်တခါပဲ…. တွတ်ပီပေါ်လာတော့ ကာတွန်း သိပ်မဖတ်ဖြစ်တော့ဝူး.. ဖတ်မိရင်တော့ ကြိုက်တယ်.. သို့ပေသိ တကူးတက ကာတွန်းဖတ်တဲ့ အရွယ်လွန်သွားပြီ… အခြားနာမည်ကြီး ဆရာတွေလည်း ရှိသေးတယ်…။ တေဇ၊ ရွှေသွေးတို့က သိပ်ငယ်သူတွေ အတွက်ပဲ ကောင်းတယ်ထင်တယ်.. ပညာပေးဆန်လို့….။ ကာတွန်းဆိုတာ ရယ်ရမှ၊ ဒါမှ မဟုတ်လည်း သဘာဝလွန်ဖြစ်မှ ကောင်းတာဂလား…
ကာတွန်းကို အဲလို သတ်မှတ်ပြန်တော့လဲ
ဘဝသရုပ်ဖော်တွေ အောင်မြင်တဲ့ တစ်ခေတ်ကို ပြန် တွေးမိလာသဗျ
တေဇထဲက ကျမချစ်ချစ်ပါရှင့် အခန်းဆက်တွေရှိသေးတယ်။
ဖွားဖွား၊ဖေဖေ၊မေမေ၊အကိုလေးကိုစံခင်၊မမညို၊မောင်လေးအတွတ်၊ညီမလေးမိစု၊သူငယ်ချင်းအပါနဲ့အမာ +ချစ်ချစ် ပေါ့။
ကာတွန်းဦးအောင်ရှိန်ရဲ့ ဦးလူပေါ(RIT အ၀င်ဂိတ်ကြီးတောင် သူ့ခေါင်းပုံပေါက်လို့ ဦးလူပေါဂိတ်တဲ့)ဦးလူချော ရှိသေးတယ်။
နောက်ပြီး စုံထောက်ကြီး ကြံ့ဗဟုံး၊စုံထောက် ပေါ်ဆန်းမွှေး ရှိတယ်။
ကာတွန်းအောင်အောင်ရဲ့ ရွှေဂေါင်းပြောင်တွေဆို ရုပ်ရှင်တောင် ရိုက်ခဲ့သေးတယ်။
အဲ့ဒီ အခန်းဆက်ကိုတော့ မသိတော့ဘူး……ဗျ
အက်ရှင်တွေရဲ့ ခေတ်ဦးလို့ပြောလို့ ရမလားပဲ
မာဂရေ သူများရေးတဲ့စာထဲမှာ ၀င်ငံတယ်လို့တော့ မထင်စေချင်ဘူး မင်းရေးတာလေးဖတ်မိတော့ ကိုယ်ရေးခဲ့ဘူးတာလေးနဲ့ ပေးချင်တဲ့ စကားက တူနေတယ်ထင်လို့ပါ
2011ကေ၇းပြီး မန်းလေးဂေဇက်မှာတင်ခဲ့ဘူးပါတယ်
ဝင်ငံတယ်လို့ လုံးဝ မထင်တာပါဗျာ
ပိုပြီး အသက်ဝင်အောင် အားဖြည့်တယ်လို့ပဲ ကျေးဇူးတင်စွာနဲ့ ခံယူမိပါတယ်။
ဒီစာလေးကို ကျွန်တော် ပုံနှိပ်စာမူ အဖြစ်နဲ့ (shade မှာလား မသိ) ဖတ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဂျာနယ် ဖတ်တာ နည်းနေတဲ့ ကျွန်တော်၊ မန်းက ဂျာနယ်ဆို ပိုလို့တောင်ဝေးတဲ့ ကျွန်တော် မှတ်မှတ်ရရ ဖတ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးပါ။
ဖတ်ပြီးတော့လဲ တကယ်ကို နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် သဘောကျ အားရမိတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ ကို တိုက်ရိုက် ပြောပြထားတာကိုး။
လက်ရှိ ဒီပို့စ်ကို ရေးတော့ ဖြစ်မိတဲ့ ခံစားချက်လေးက
ကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ ကလေး ပုစုကွေးလေးတွေ
လက်ထဲမှာ ဖုန်းကလေးတွေ ကိုယ်စီကိုင်လို့ ဂိမ်းဆော့နေတာတွေ
နောက် ဂိမ်းဆိုင်မှာ အားရပါးရ ဆော့နေတဲ့ ကလေးတွေ ကို တစ်ခုခု လုပ်စေချင်တဲ့ ခံစားချက်
နောက် အဲဒီအချိန်က ကိုယ်တွေ စွဲမက်ခဲ့တဲ့ အရာတွေကို ပြန် လွမ်းမိတဲ့ အတွေး
သူတို့လေးတွေအတွက် ဖတ်စရာနေရာ (လတ်တလောမှာ) နည်းနေတာကို မြင်မိသွားတာပါ။
ebook တွေကို သူတို့ ဆော့နေတဲ့ ဖုန်းတွေနဲ့ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
အင်တာနက်နဲ့ အထိအတွေ့မှာ မစိမ်းလို့ ရှာလို့ ဖွေလို့လဲ ဖတ်နိုင်ကြပါလိမ့်မယ်
ဒါပေမင့် သူတို့ကို စာဖတ်ချင်စိတ်ကလေး၊ စာပေကို တန်ဖိုးထားမယ့် စိတ်ကလေးကို ထည့်မပေးနိုင်ရင်
စိတ်အာဟာရအတွက် စာဖတ်ကြမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ တွေးမိတယ်။
သူတို့ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်းအရာကိုမှ စိတ်ဝင်တစား ရှာကြဖွေကြ ဖတ်ကြမှာလေ။
စာဖတ်ကြရာမှာလဲ သုတ၊ရသ စုံနေတဲ့အထဲက
သုတကိုပဲ အားပေးလွန်းပြီး ရသစာပေနဲ့ ဝေးသွားကြမလားလို့ စိုးရိမ်မိတယ်လို့ ဆိုရမလား…
အဲဒီလို အတွေးပေါင်း မြောက်များစွာနဲ့ ချာချာလည်နေတာကတော့ အခုထိပဲ လေးပေါက်ရေ………
စကားမစပ် စာအပြန် နောက်ကျတာ ခွင့်လွှတ်ပါဗျ
မနောကတော့ တို့ကျောင်းသားစာစောင်လည်း အရမ်းသဘောကျနှစ်ခြိုက်ခဲ့သလို တေဇလည်း မလွတ်တမ်းဖတ်ခဲ့ရတယ်။ ကာတွန်းကတော့ ဦးဘဂျမ်းပုံတွေဆို အရမ်းသဘောကျတယ်။ ပုံမှာကို အသက်ဝင်ပြီး ရယ်လည်း ရယ်ရလို့ပါ။
ဦးဘဂျမ်းရဲ့ ကာတွန်းတွေကို ဖတ်မိတော့
အခုထိ ခေတ်မီနေတာကို သွားသွား တွေ့မိသလိုပဲ
သူ ရေးတဲ့ ကိုပြူးနဲ့ မပြုံး စာအုပ်ကလေးများရရင် ဖတ်ချင်စမ်းပါဘိ
သိကြားမင်း ဆိုတော့ ခပ်ဖိုင့်ဖိုင့် ဝဝ ဖြစ်ရမယ် မှန်းတာ။
ဒီ သိကြား က ပိန်ရှည်ရှည် ဖြစ်နေတော့ ကာတွန်းတွေ ရဲ့ သမိုင်း စာမျက်နှာ တွေ ပြန်ပြင်ရမယ်။
ကျွန်တော်ပဲ ပြင်ပေးလိုက်ရင် ကောင်းမလား လို့
တစ်နှစ်ကျော် ကြာအပြီး ……
ဖိုးသိကြား တစ်ယောက် သိကြားမင်း ပုံစံ ပြင်လိုက်ကာ ပြောင်းပြီး မပြီး သိချင်စမ်းပါဘိ။ lol:-)
ကိုယ်ပိုင် အမြင်အရတော့ ပိန်ပိန်ပါးပါးနဲ့ လူရည်သန့်ရုပ်
သူများတွေ အမြင်တော့ ညှင်းသိုးသိုး မှုန်ကုပ်ကုပ်နဲ့ သူပုန်ရုပ်
အခုလက်ရှိ ဖြစ်နေတာ အဲ့လိုပဲ အရီးရေ..
ကာတွန်းလား သ်ိပ်ကြိုက် ငယ်ကထဲက ခုထိ
ကာတွန်းတွေ ဖတ်လိုက် ကာတွန်းကားကြည့်လိုက်နဲ့
ခုထိတော့ ကာတွန်းနဲ့ မကင်းကွာသေးဘူး ပြောရမပေါ့